Jwxo-shiil, oo Xili ay Xeedho iyo Fandhaal Kala Dhaceen Qaatay Magaca Somaliweyn – Rasaasa News
Jun 9, 2010 Jwxo-shiil, oo Xili ay Xeedho iyo Fandhaal Kala Dhaceen Qaatay Magaca Somaliweyn
Jwxo-shiil, oo markii uu wax waliba u socon waayey halgankii Jwxo-na afka dhulka u galiyey, xiligan jecelaaday in uu noqdo hogaamiye Somaliweyn, bal si uu u helo taageerayaal uu wali qaaraan ka heli karo.
Jwxo, waxay ka dhalatay dhibaato halganka Somalida Ogadeeniya ka soo gaadhay Jamhuuriyadihii Somaliyeed ee kala dambeeyey, arintaas oo qadyada Ogadeniya ka dhigtay qadyad u dhaxaysa Somaliya iyo Itobiya. Laba dagaal oo ku dhexmaray labada dal Ogadeeniya oo kolkii dambe loo gudbiyey UN, ayaa waxaa la saaray gardarada iyo khasaarihii dagaalada dalka Somaliya.
Arintaasi waxay ahayd midii keentay in aqoon yahanada u dhalatay Somalida Ogadeeniya ay u aas aaseen Jwxo. Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya ayaa waxaa ka mid ah qodobadeeda aas aasiga ah; in qadyada Ogadeeniya laga xoreeyo ku murimurugsanaanta Jamhuuriyada Somaliya, mar labaadkana in laga xoreeyo gumaysiga Itobiya.
Itobiya ayaa iyadu ku doodan dalka ay dariska yihiin ee somaliya uu dhul balaadhsi rabo; arintaasi waxaaa ay dhamaantay kolkii ay burburtay Jamhuuriyadii Somaliya, ka dibna ay dagaalka sii waday Jabhad wadani ah.
Jwxo, ayaa ilaahay amarkii waxaa soo dhex galay ninka lagu naanayso Jwxo-shiil, oo ahaa Janan Somaliyeed, in kasta oo hawlwadeenada Jabhadu ay ahaayeen dhalinyaro wadaniyiin ah oo ogg goolkooda.
Waxaa Itobiya mar labaad u furmay fursad ah qadyadii Ogadeeniya in ay dib ula xidhiidhiso Somaliya, taas oo ay daw u leedahay.
Jwxo-shiil, kolkiiba waxaa uu bilaabay in uu xidhiidh la yeesho dagaal Oogayaalka Somaliya, arintaas oo furtay wado siyaasadeed oo hor leh. Waxaanaba markii dambe ay cwxo dagaalo kula galeen ururo Somaliyeed gudaha Jamhuuriyada Somaliya.
Si loo xaliyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee ay Jwxo cagaha la gashay, ayaa xubno sare ka mid ah Jwxo, ay galeen gudaha, dabadeedna Jwxo-shiil ayaa khaarijiyey. Halkaasi waxaa ka dhacay kacdoon laggaga horjeedo ururka Jwxo, oo ay dadweynuhu u arkeen in ayna Jwxo ku jirin wax halgan ah oo dan u ah ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaana gaadhay Jwxo burbur ciidan, mid siyaasadeed iyo mid bulshoba. Waxaana xiligan socda in Jabhado ka dagaalami jiray gabalka oo heshiis la gaadhay xukuumada Itobiya.
Xiligan waxaa uu Jwxo-shiil bilaabay qorshe Somaliweyn, oo uu rabo in uu helo wadaniyiin Somali ah oo ka cadhaysan faragalinta Itobiya ay ku hayso, waxaana uu meel iska dhigay qadyadii Ogadeeniya ee uu ku maxaabsan jiray.